बालुवाटारमा देउवा, पौडेल गोप्य छलफल भयो यस्तो बोल्ड निर्णय — Imandarmedia.com
बालुवाटारमा देउवा, पौडेल गोप्य छलफल भयो यस्तो बोल्ड निर्णय
काठमाडौ। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षीय नेताहरूबीच छलफल भएको छ । पार्टीको १४ औँ महाधिवेशन र मन्त्रिपरिषद् विस्तारका सन्दर्भमा पौडेल पक्षका नेताहरूले सभापति देउवासँग छलफल गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री देउवासँग कुराकानी गर्ने आफू पक्षीय नेताहरू लिएर बिहीबार बिहान पौडेल प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा पुगेका थिए । क्रियाशील सदस्यता विवाद टुङ्गिन बाँकी २० जिल्लाको समस्या समाधान गरी वडा अधिवेशन सुरु गर्ने विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री देउवाका प्रमुख स्वकीय सचिव भानु देउवाले रातोपाटीलाई बताए ।
भदौ १८ गते वडा अधिवेशनको मिति तोकिए पनि २० जिल्लामा अधिवेशनबारे अझै अन्योल कायमै छ । काँग्रेसले प्रदेश १ को मोरङ र प्रदेश २ का सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा र रौतहटको क्रियाशील सदस्यता सूची सार्वजनिक गरेको छैन ।
यस्तै बागमती प्रदेशको काठमाडौँ, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे र रसुवा तथा लुम्बिनीको कपिलवस्तु, बाँके र बर्दिया तथा कर्णालीको डोल्पा र सुर्खेतको पनि वडा अधिवेशन अनिश्चित छ । सुदूरपश्चिमका कैलाली र बाजुराको क्रियाशील सदस्यता सूची सार्वजनिक नहुँदा ती जिल्लामा पनि वडा अधिवेशन अनिश्चित बनेको छ ।
उक्त समस्याको निवास खोजेर तत्काल वडा अधिवेशन सुरु गर्न पौडेल पक्षले सभापतिको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । पौडेल पक्षीय एक नेताका अनुसार नेताहरूबीच सबै जिल्लाको वडा अधिवेशन सकिएपछि मात्र पालिका अधिवेशन सुरु गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । ७७ जिल्लामा पालिका अधिवेशन एकै पटक गर्ने नेताहरुबीच सहमति भएको ती नेताले बताए ।
भदौ २७ गते पालिका अधिवेशन, असोज १ गते प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन र असोज ५ गते प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन÷एक मात्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशनको कार्यतालिकासमेत प्रभावित हुने भएको छ ।
असोज १० गतेका लागि तोकिएको एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला अधिवेशन पनि प्रभावित हुन सक्ने निर्वाचन समितिको भनाइ छ । प्रदेश अधिवेशन कात्तिक १० देखि १२ गतेसम्म र केन्द्रीय महाधिवेशन आगामी मङ्सिर ९ देखि १३ गतेसम्म तय गरिएको छ ।
यस्तै छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले केही दिन अझै मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्ने आग्रह गरेको बताएका थिए । पौडेल समूहका नेताहरूले गठबन्धनसँग मन्त्रालयको टुङ्गो लगाएर काँग्रेसको भागमा पर्ने मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्ने सुझाएका थिए । देउवाले गठबन्धनसँग छलफल नै भइरहेको जवाफ दिएको बैठकमा सहभागी एक नेताले रातोपाटी जानकारी दिए ।
भदौ २८ गते माधव नेपालको पार्टी दर्ता सम्बन्धी एमालेले दर्ता गराएको मुद्दाको पेसी तोकिएको छ । त्यसको फैसला आएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने काँग्रेस नेताहरूको भनाइ छ । काँग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले पनि त्यो सङ्केत गरेका छन् ।
सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादीले संसदीय मर्यादा कायम गर्न एमालेलाई चेतावनी दिएको छ । बुधबार बसेको एकीकृत समाजवादीको संसदीय दलको बैठकले संसद्मा उत्ताउलो नबन्ने, संयमतापूर्वक आरोपको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ ।
माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीको बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा सांसद विरोध खतिवडाले ओलीको कारबाहीमा परेका १४ जना एकीकृत समाजवादीका सांसद संसद्मा उपस्थित भए संसद् चल्न नदिने भन्नु मिडिया खपतको लागि मात्रै भएको बताए । उनले एउटा दलको नेतालाई संसद्मा उपस्थित भए संसद् नै चल्न नदिने भन्ने उनी को हुन् ? भन्दै प्रश्नसमेत गरे ।
उनले भने, ‘आज संसद्मा हामी १४ जना उपस्थित भए संसद् चल्न नदिने भनेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले भन्नुभएको रहेछ, यस्तो भन्ने उनी को हुन् ? एउटा दलको नेतालाई उपस्थित भए संसद् चल्न नदिने भन्ने उनी को हुन् ? जब कि संसद्को नियमावली २१, संविधानको धारा १०५ ले के भन्छ भने अदालतमा चढेको विचाराधीन मुद्दामा संसद्मा बहस गर्न पाइँदैन भन्ने स्पष्ट छ, उनीहरू नै मुद्दामा गएका हुन्, केपी ओलीलाई कानुन, नियम, संविधान, विधि, पद्धति, लोकतान्त्रिक सरोकार योसँग कुनै सम्बन्ध छैन, सत्तापक्षको हैसियतले उनीहरूले उठाएका कुराको प्रतिवाद गर्छौँ, सभामुखसँग आज्ञा लिएर ।
यो संसद् चल्न नदिने कुरा मिडियाबाजी खपतका लागि हो, टाइँटाईँ फिस हुने कुरा हो, तैपनि संसद्मा हामी उत्ताउलो हुँदैनौँ, संयमतापूर्वक प्रतिवाद गर्दछौँ, संयमतालाई उल्लंघन गर्ने काम गरे जस्तालाई त्यस्तै गर्नका लागि मान्य मान्यज्यूहरू नै जम्मा भएका हौँ, कोही बहादुर र कोही कमजोर भन्ने हुँदैन, कोही दाह्रासिंह र कोही बंगारासिंह भन्ने हुँदैन, त्यसकारण हामी संसद्भित्र संसदीय मर्यादालाई पालन गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ ।’
सांसद खतिवडाले संसद्मा तोकिएको ठाउँमा बस्ने बताउँदै एमालेका नेताहरूले उठाएका कुराहरूको प्रतिवाद गर्ने बताए । उनले एमाले अध्यक्ष ओलीका सबै षड्यन्त्र असफल भइरहेको पनि बताए ।
प्रतिनिधिसभा बैठक आगामी २५ भदौमा बस्ने भएको छ । बुधबार बसेको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले निरन्तर अवरोध गरेपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले बैठक स्थगित गरेका हुन् । सभामुख सापकोटाले बुधबार पहिलो र दोस्रो बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरेका थिए । तेस्रो बैठकमा पनि एमाले सांसदहरूले अवरोध गरेपछि २५ भदौमा बस्ने गरी बैठक स्थगित भएको हो ।
तेस्रो बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश पेस गरेका छन् । राष्ट्रियसभाको बैठक पनि आगामी २५ भदौसम्मका लागि स्थगित भएको छ । एमालेले अवरोध गरेपछि बैठक स्थगित भएको हो ।